Very finoana ve ianao amin'ny maha-olombelona? Ity no fomba hamerenana azy io. - Blog
Very finoana ve ianao amin'ny maha-olombelona? Ity ny fomba famerenana amin'ny laoniny azy.
Raha sendra nahita an'ity lahatsoratra ity ianao dia mety ho ambany dia ambany ny finoanao ny olombelona ankehitriny.
Mihena ny finoanao ny karazana antsika.
Nefa tsy namoy ny fanantenana ianao.
Raha mitady fanazavana momba ny antony mety hahatsapanao izany ianao, sy ny fomba hanovana ny fomba fijerinao ary hahazoana ny finoana kely nanananao taloha, dia tonga amin'ny toerana mety ianao.
fomba hahafantarana ny tenanao
Ity lahatsoratra ity dia manomboka amin'ny fifanakalozan-kevitra vitsivitsy amin'ireo antony mety hahatonga ny olona hanomboka ara-dalàna ny fahatsorany momba ny fanjakan'ny olombelona.
Avy eo dia mijery izay mety hitarika anao hahatsapa izany fahaverezan'ny finoana izany.
Raha misy marina aminao, dia te-hamaky foana ianao ho an'ny torohevitra momba ny fanovana ny fomba fijerinao, hananganana ny finoanao ny olombelona ary hanomboka hahatsapa ho tsara kokoa amin'ny ankapobeny ny fanjakan'izao tontolo izao.
Antony 6 mety hanary ny finoanao amin'ny olombelona
Manomboka mahatsapa izany ny olona sasany noho ny zavatra mitranga eto amin'izao tontolo izao amin'ny ankapobeny.
Ho an'ny hafa dia ny fifandraisan'izy ireo manokana sy ny zavatra niainany no mahatonga ireo fahatsapana ireo.
Na, mety ho fifangaroana lehibe sy sarotra amin'ny karazan-javatra rehetra.
Andao hojerentsika ny sasany amin'ireo antony mahazatra indrindra mahatonga ny olona tsy hatoky ny olombelona intsony.
1. Nijery vaovao ianao
Eny ary, ka toa somary pessimistic ity iray ity, fa ny ankamaroan'ny vaovao dia, araka ny fantatsika rehetra, ratsy.
Vaovao ratsy dia mitaona ny olona mijery sy mihaino ary manindry.
Ny vaovao tsara dia tsy dia miteraka lohateny lehibe.
Raha manaraka akaiky ny vaovao ianao dia mety ho nanomboka nahatsapa ho somary tototry ny tsy fetezana rehetra, miady mafy hahatakatra ny fomba ahafahan'ny olombelona mahavita zavatra mahatsiravina toy izany.
2. Efa nanatri-maso herisetra na habibiana voalohany ianao
Raha tsy nanam-bintana ianao nahita maso fihetsika mahery setra na habibiana natao tamin'ny olona na biby na koa ny planeta, dia mety hanapa-kevitra ny ati-doha fa midika izany fa ratsy ny olombelona rehetra.
3. Nisy olona natokisanao namela anao
Ny namana, olona iray ao amin'ny fianakaviana, na mpiara-miombon'antoka tantaram-pitiavana tsy nahavita anao dia afaka mampihorohoro ny fototra iorenanao sy ny finoanao ny fahatsaran'ny olona.
Fanararaotana, fifehezana, fanodikodinana na nandainga amin'ny alalàn'ny olona akaiky anao dia sarotra ny mandray azy.
Indraindray dia sarotra ny mitazona ny finoanao ny olombelona amin'ny maha-karazany anao rehefa ny iray amin'ireo olona tianao indrindra no nitondra anao ratsy.
4. Ianao dia navelan'ny hery izay
Tsy ny olona akaiky antsika ihany no afaka mandiso fanantenana antsika.
Mety ho diso fanantenana koa isika amin'ny fitondran-tenan'ny governemanta na fikambanana natao hiarovana na hiaro antsika.
5. Nifandray ianao
Mampalahelo fa be dia be ny mpanakanto con any. Raha lasa lasibatry ny iray ianao dia mety ho sarotra izany matokia indray .
6. Niaina fanavakavahana ianao
Raha niharan'ny tsy fanajana na fanavakavahana ianao noho ny zavatra inoanao na ny fomba fijerinao, avy aiza ianao, na ny fisehoanao ara-batana dia mety hahatsapa ho tsy misy dikany ianao momba ny zanak'olombelona.
Zavatra 4 mety ho tsapanao raha very finoana amin'ny zanak'olombelona ianao
Ity fomba fijery eo amin'ny toetry ny zanak'olombelona ity dia mety hanaitra ny karazana fahatsapana ratsy rehetra.
Mety hahatsapa ny iray amin'ireto ianao, na mety hahatsapa cocktail iray manontolo indray mandeha.
1. Tsy fananana fanantenana
Raha mihozongozona ny finoanao ny olombelona dia mety tsy nanana fanantenana firy ianao amin'ny ho avy.
ny fomba fankalazana ny taom-baovao irery
Ho sahirana ianao hahita jiro any amin'ny faran'ny tionelin'ny zanak'olombelona, ​​avelao ny anao irery. Mety hiteraka tsy firaikana na famoizam-po izany.
Ity dia fanehoan-kevitra mahazatra amin'ny fahaverezan'ny finoana ny zanak'olombelona.
Diso fanantenana ianao amin'ny fomba fandehan'ny raharaha ary miseho amin'ny fahatezerana tsy misy lalana izany.
3. Fahatsapana ny tsy fananana
Raha tsy manam-pinoana ny zanak'olombelona amin'ny ankapobeny ianao, dia vintana tsy hahatsapanao hifandray manokana amin'ny karazanay.
Mety hahatsapa ho toy ny any ivelany ianao, na toy ny any ivelany mijery ny hadalana rehetra.
4. Maniry fatratra ny fanovana
Mety ho io fahaverezan'ny finoana io dia miseho amin'ny faniriany hahita fiovana eo amin'izao tontolo izao, ary angamba ny fandehanana any ataovy izay hisian'izany fanovana izany .
inona ny sandan'ny mpanjakavavy latifah
Inona no tanjon'ny fiainana? (Tsy araka ny eritreritrao)
Maninona ianao no tokony ho velona indray andro any (na ahoana no hanaovana azy)
Maninona no avela hiala amin'ny zavatra antenainao fa hahasambatra kokoa?
Zavatra 7 Ny ankamaroan'ny olona dia mahazo amin'ny fiainana
Fomba 7 hamerenana amin'ny laoniny ny finoanao amin'ny olombelona
Tonga izao ny fotoana ho an'ny fizarana be fanantenana kokoa amin'ity lahatsoratra ity.
Rehefa dinihina tokoa, na dia mety hohamarinina sy tsy azo ihodivirana aza ireo fahatsapana ireo, dia tsy manampy na mampiorina izy ireo, ary tsy tokony hihazona azy ireo isika.
Tsy hamaha ny olanao na ny olan'ny olombelona amin'ny ankapobeny izy ireo.
Ny hataon'izy ireo dia ny mampidina anao sy misoroka anao tsy hanorina fifandraisana salama ary hisy fiatraikany tsara eo amin'izao tontolo izao.
Noho izany, raha sy rehefa mahatsapa ireo fihetsem-po ireo ianao dia zava-dehibe ny fahalalana ny fomba fanodinana azy ireo sy ny fomba hamerenana amin'ny laoniny ny finoanao ny maha-olombelona, ​​ho an'ny tsirairay.
1. Mitondrà olon-kafa araka ny itiavanao ny fitondrana anao
Tsy afaka mifehy ny zava-mitranga eto amin'izao tontolo izao sy aminao foana ianao, fa afaka mifehy ny fomba fandraisanao zavatra, sy ny fomba itondranao ireo manodidina anao.
Tsy maintsy ho solafaka ianao ary hanao hadisoana amin'izany, satria tsy misy olona tonga lafatra, fa ny tena manandrana dia ny manandrana.
mandeha haingana loatra amiko izy
Raha ianao manaja olona hafa am-panajana , fangoraham-po, ary fahamendrehana, mety hisy hamerinao azy imbetsaka.
2. Mikatsaka vaovao tsara am-pahavitrihana
Mipetraka fotsiny isika ary mamela vaovao tonga any amintsika fa tsy mivoaka hitady izany.
Ary ny tantara lehibe indrindra dia ny tantara ratsy hatrany.
Manaova teboka mavitrika hahazoana antoka fa mandanjalanja kokoa ny vaovao laninao, mitady tantara vaovao tsara.
Ny fandefasana google fotsiny io fehezanteny io, ‘tantara vaovao mahafaly’, dia afaka mamoha tontolon'ny vaovao mahafinaritra iray izay mbola tsy tsapanao akory fa eo.
3. Aza mizara negativa amin'ny media sosialy
Ny fitarainana momba ny fanjakan'izao tontolo izao amin'ny media sosialy na ny fifamaliana amin'ny olona tsy mitovy hevitra aminao dia tsy hahatratra na inona na inona, na hanova ny sain'ny olona.
Fa kosa zarao ny tantara tsara momba ny zavatra ataon'ny olombelona sy ny zava-bitany.
Ny vaovao tsara dia tsy tonga hatrany amin'ny toerana akaiky lavitra raha toa ka vaovao ratsy, koa ataovy izay azonao atao mba hampitomboana azy.
4. Mandany fotoana amin'ny ankizy
Ny zaza dia mety ho fofonaina madio, mahita zavatra amin'ny tena maha-izy azy tsy misy mangidy na manadala olona .
Mety ho mamelombelona tokoa ny mahita ny masony, mahita ny hatsarana sy ny fifaliana, fa tsy ny fahitana ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny setroka manjavozavo.
5. Mpirotsaka an-tsitrapo
Ny zavatra tena afaka mametraka ny fiainanao amin'ny fomba fijery dia manampy mavitrika ireo izay manana azy ratsy lavitra noho ianao.
Ny fandaniana fotoana manodidina ireo olona nanana fiainana sarotra nefa mbola mafana fo sy be fanantenana dia fomba tonga lafatra hanombohana mahita ny toe-javatra misy anao, sy izao tontolo izao iray manontolo, amin'ny alàlan'ny maso samihafa.
Mety manampy ny hafa ianao, fa ianao angamba no tena handray soa. Ho tsapanao fa, ambanin'izany rehetra izany, ny olombelona dia tsy mampino ary tsy voahozongozona , ary tsy misy tsara na ratsy daholo.
6. Ataovy ho fifantohana ny fankasitrahana
Mety ho hitanao fa mahasoa tokoa ny manoratra diary fankasitrahana. Betsaka ny olona manao an'izany.
Fa na dia tsy tianao ny manoratra izay zavatra ankasitrahanao aza, ny fanaovana fiezahana am-pahatsorana hanaiky ny zavatra rehetra ataon'ny olombelona hafa ho anao isan'andro dia afaka mampiova ny fifantohanao.
Manomboka amin'ny olon-tsy fantatra manampy anao hitondra valizy mavesatra hatrany amin'ny tohatra mankamin'ny reninao maneno anao hilaza aminao ny avonavon'izy ireo momba anao, mankalazà.
Tampoka eo dia hanomboka hankasitraka ny zavatra rehetra ianao, na lehibe na kely, izay ataon'ny mpiara-belona aminao ho anao, ary rehefa mifantoka amin'izany isan'andro ianao, dia sarotra ny manaratsy loatra ny zanak'olombelona.
7. Matokia bebe kokoa
Matokia fa haverin'ny namanao ilay boky nampindrana anao azy. Arakaraky ny hametrahanao ny finoana ny olona no ahazoan'izy ireo miaina mifanaraka amin'izany, mankasitraka ny fahatokisanao sy mamerina azy.
Ataovy izay hatokisanao ny toerana misy anao fa tsy very ny sainao.
Raha mandeha ny lakolosy fanairana, henoy izy ireo, fa andramo tsy avela handresy lahatra anao ny tantara ratsy fa ny soa omenao dia tsy hampiasaina ho soa, na ny vola omenao ny olona tsy manan-kialofana dia holaniana amin'ny zava-mahadomelina fa tsy fandriana mandritra ny alina.
Malala-tanana amin'ny fotoananao, ny volanao ary ny fanananao ara-nofo.
fihaonana amin'ny olona voalohany
Mahatma Gandhi indray mandeha nilaza hoe:
“Tsy tokony hiala amin'ny finoanao ny olombelona. Ranomasimbe ny zanak'olombelona raha maloto ny ranona vitsivitsy, tsy lasa maloto ny ranomasina ”.
Na ratsy toa inona aza ny fisehoan-javatra indraindray, dia misy zavatra tsara betsaka eto amin'izao tontolo izao.
Raharaha fotsiny ny misafidy ny hanao an'io hatsaram-panahy io ho fifantohanao, mankalaza ny zavatra mahafinaritra rehetra ataon'ny olombelona isan'andro, ary indrindra ny hatsaram-panahy amin'ny hafa sy amin'ny tenanao.
Ataovy ireo zavatra ireo dia hiverina amin'ny laoniny ny finoanao ny olombelona.
ny fomba manontany ny lehilahy avy ny andinin-teny ohatra
manambady amin'ny fahitana voalohany mbola miaraka
ny fomba hiatrehana ny namana mirehareha
ny fomba hahatonga azy malahelo ahy ho lasa adala
tsy manisy sonia izany ao aminao izy